सेयर बजारले ‘तल्लो विन्दु’ छाडेकै हो ?
सेयर बजारको परिसूचक नेप्से फागुन १९ गते ११ सय अंकमा झर्यो। जुन तीन वर्षयताकै न्यून विन्दु थियो। त्यसयता क्रमिक रुपमा बढ्न थालेको नेप्से एक सातापछि आज सोमबार ११ सय ४२ अंकमा पुगेको छ। एक साताको अवधिमा ४२ अंकले नेप्से उक्लिएको छ।
११ सयको अंकलाई तल्लो विन्दु छाडेर सेयर बजार अघि बढेको एक साताको ट्रेन्डमा देखिन्छ। के अब ११ सय अंक नै तल्लो विन्दु (बटम प्वाइन्ट) होला ? हुन त बजारको विन्दु कसैले ठ्याक्कै भन्न सक्दैन।
अनुमानका भरमा कसैले भनेको मिलेमा त्यो संयोग नै हो। तर बजारको उतारचढाव अनुमान गर्नका लागि विभिन्न आधारहरु भने बनिरहेकै हुन्छन्। यद्यपी ति आधारमा लगानीकर्ताको बुझाई र विश्लेषण पनि फरक फरक हुन सक्छ।
तिनै आधारमा केन्द्रित रहँदा कतिपय लगानीकर्ताले बजारले ११ सयलाई तल्लो विन्दुमा छोडिसकेको बताउँछन् भने कतिपयले अहिलेको वृद्धिलाई क्षणिक भएको तर्क गर्छन्।
सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले बढेको यो बजारलाई पालुवा पलाउन लागेको संज्ञा दिए। देशबाहिर रहेका उनले सामाजिक संजालमार्फत भनेका छन् ‘वातावरणको कुरा गर्नेले भए अलिक छिटो हरियो पलायो जलवायु परिवर्तनको असर भन्थे होला । सिजन सुरु हुन लागेको हो । जस्तोसुकै खडेरि लागे पनि बसन्त ऋतु लागेपछि पालुवा पलाउन सुरु गर्छ। बसन्त ऋतु सुरु हुनै लाग्दा नेप्सेमा पनि पालुवा पलाउन सुरु भएको छ। सेयर किन्नलाई पात झर्ने बेला किन कुर्ने पालुवाबाटै आनन्द लिदै जाँउ। अन्य खर्च, लगानी थाँति राखेर सिजनको फल टिप्नका लागि अघि बढ्दा राम्रै नतिजा निस्केला। इतिहास विर्सन सकिदैन।’
लगानीकर्ताको धारणा पनि फरक फरक छ। केहीले अब ११ सयभन्दा तल नझर्ने दावी गर्छन्। सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल बजारले ११ सयलाई तल्लो विन्दु छाडिसकेको बताए।
‘११ सयलाई तल्लो विन्दु बनाइसकेको छ, अब सामान्य अंक तलमाथि भए पनि बजार सो विन्दुभन्दा तल झर्दैन’ सेतोपाटीसँग अर्यालले भने।
अब क्रमिक रुपमा व्याजदर घट्दै जाने, सरकारी खर्चहरु बढ्दै जाने र तरलतामा सहजता हुने बताउँदै उनले बजार क्रमिक रुपमा बढ्ने बताए। ‘कतिपय कम्पनीहरुको मूल्य बुक भ्यालुमै झरेको अवस्था छ, संस्थागत लगानीकर्ताले पनि अहिले सेयर उठाउन थाल्दा प्रभाव परेको हो’ अर्यालले भने।
विगतका वर्षहरुलाई हेर्दा फागुन चैतबाट पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने र त्यसले पनि बजारलाई बढाउन टेवा पुगेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ कम्पनीहरुको दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणका आधारमा लगानीको निर्णय गर्न पनि यो समय अनुकुल मानिन्छ।
अर्काथरी लगानीकर्ता भने बजारको वृद्धि जुनसुकै बेला रोकिन सक्ने र तल्लो विन्दुको (११ सय)को रेकर्ड पनि तोडिन सक्ने दावी गर्छन्। लगानीकर्ता तिलक कोइराला सेयर बजारको अंकलाई कसैले सही रुपमा अनुमान गर्न नसक्ने भएकाले लगानीकर्ता सुरक्षित भइरहनुपर्ने बताउँछन्। पुनः लगानीकर्ताको मनोवल कमजोर हुने अवस्था आएमा ११ सयको तल्लो विन्दु तोडिन पनि सक्ने उनले बताए।
‘उपर्युक्त पूर्वाधार, नीति, प्रविधिको विकास भयो भने बजार स्वभाविक रुपमा माथि जान्छ’ उनले भने ‘कुलो बनाइसकेपछि पानी बग्छ, खेती सिँचाई हुन्छ, त्यसकारण राज्यले कुलो बनाउनुपर्छ।’ सेयर बजारको विकासका लागि पूर्वाधार, प्रविधि र अन्य आधारहरु अझै बलियो नभएको उनको तर्क छ।
त्यस्तै लगानीकर्ता पनि आफू सुरक्षित हुनेगरी उपर्युक्त पोर्टफोलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘कम्पनीलाई अध्ययन गरेर बुझेर सुरक्षित रुपमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ, बजारमा जोखिम पनि छ भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ’ कोइरालाले भने।